Madaxweyne Siilaanyo Oo 360, Console kulanka weyn, kaliya ma kuu ogolaanaysaa inaad si fiican u ciyaaro kulan, laakiin sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u ciyaaro videos ama filimada. Si kastaba ha ahaatee, waxa keliya oo ay taageertaa dhowr ah qaabab video sida wmv. Inta badan files video aan noqon kartaa mid taageero Madaxweyne Siilaanyo Oo 360, waxaad u baahan tahay in badan oo iyaga loogu badalo in ay Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 qaabab si buuxda u taageereen la barnaamijyadooda qaar ka mid ah. Ka dib markii in, waa in aad wareejiso kuwaas files warbaahinta in Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 via qalab USB, Windows Media Player, Windows Media Center, Windows Home Server ama Zune Software. Laakiin waa hab sahlan in samaysay shaqada?
Halkan waxaan aad ugu boorinayna Wondershare Video Converter . In update ugu dambeeyey, waxaa ka mid ah plugin awood loo yaqaan Media Server, kaas oo awood kuu toos ah qulquli kasta oo ah qaabab video in Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 aan diinta. Ma danaynaysaa? Akhri si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Talo: Ma doonaysaa in aad hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo raaxaysan warbaahinta on TV? Fiiri tilmaan
Function Media gooya kaa caawinaysaa in aad si toos ah u sii qulquli qaab video KASTA in Madaxweyne Siilaanyo Oo 360.
Sidoo kale gelineya inaad si fudud u maamuli lahayd video files qasabno gudahood.
Waxaa la dhisay-in downloader online xitaa kaa caawinaysaa in aad si toos ah u soo bixi iyo files il.
Talaabada 1: videos Import in this video Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 Converter
In tallaabadaas, kaliya aad u dajiyaan aad video deegaanka files si fudud gujinaya ah "Add Files" button ka dibna dooran videos aad rabto in aad ka kombiyuutarka, ama si toos ah u soo jiiday files bartilmaameedka ka your computer barnaamijkan, muujisay sida soo socota.
Talaabada 2: Dooro Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 sida qalab geeyo ee
Furmo suuqa il this app ee fur garaacida ah "Stream" doorasho dhinaca gacanta midigta ee suuqa kala barnaamijka. Ilaa iyo inta aad Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 waxa uu ku yaalaa shabakad isku aad PC, tusi doonaa liiska. Halkan ka dooro Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 sida qalab geeyo ah. Ka dib markii in, riix "Stream" button rukun gacanta midigta hoose ee suuqa.
Tallaabo 3: Ku bilow geeyo
Markaas plugin Server Media bilaabi doonaa. Halkan riix "Play To TV" button u muuqataa video kor ku xusan. Waxay markaas keeni doonaa faylka oo u soo dir iyada oo si aad TV. Waxaad sidoo kale riixi kartaa badhannada furmo si ay u xakameeyaan loo maqli ah.
> Resource > Video > Hel ah Great Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 Video Converter